Akhriso:-Mid kamid ah Dhacdooyinka Xanuunka Badan ee ka dhashay Xasuuqii Zoobe! | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Akhriso:-Mid kamid ah Dhacdooyinka Xanuunka Badan ee ka dhashay Xasuuqii Zoobe!
Akhriso:-Mid kamid ah Dhacdooyinka Xanuunka Badan ee ka dhashay Xasuuqii Zoobe!
Muqdisho(SONNA);-Catar Sheekh Ibraahim Gaabow waxaa uu ahaa will yar oo caseeye ah, waxaa uuna xirfadaas kaga shaqeenayay Hotelka Safaari ee magaalada Muqdisho, waxaa intaas u dheereed waxaa uu ahaa qofka kaliya ee Gogla Saliyada Salaada lagu tukado ee Majidka Hotel Safari, Saliyadaas oo ay ku tukan jireyn dhammaan macaamiisha Hotelka degan ama timaada.
Allaha unaxariistee waxaa uu ka mid ahaa dadkii ku dhintay Qaraxii Soobe ka dhacay, xilliga uu dhimanayay waxa uu ku mashquulsanaa dhigidda Saliyada Masjidka Maadaama la gali rabay Salaadii Casir.
Waxaana uu ifka kaga tegay Labo carruur ah iyo Hooyadood oo hadda Xaamilo ah kuwaas oo ku noolaa masruufka uu ka heli jiray shaqadiisa xirfada caseeyenimada ah, waxaa intaas dheer in sidoo kale Gurigiisa ay ku noolaayeen Sodohdiis iyo caruur ay dhashay iyaga oo daganaa xero barakac oo ku taala xaafada Weydow ee duleedka Muqdisho.
Khadiijo Aadan oo ah Xaaska Catar waxa ay inoo sheegtay in Catar uu ahaa qof dabeecad wanaagsan oo aysan si aad ah uga walwali jirin carruurteeda laakiin hadda waxa ay inoo sheegtay in aysan aqoon meel ay wax ka bilowdo.
Allaha u naxariistee Catar iyo qoyskiisa ayaa sidoo kale ka mid ahaa dadkii ay abaartu ka soo barakicisay deegaanadoodii oo hadda ma haystaan meel ay u laabtaan waxaana xaalad nolol xumo ku haysataa xaafadda weydow.
“Waxa uu kasoo helo shaqadiisa ayaan iimaansan jirnay, inta ay noo noqoto suurtagal ma ahayn in aan saddaxda waqti wax cunno, laakiin kama fakari jirin cabsi ah in aan baahi u dhimano, laakiin hadda sidii uu u dhintay dab lagama shidin gurigeena” ayay tiri Khadiijo Aadan oo ilmeyneysa.
Hooyada dhashay Khadiijo oo ah Catar Sodohdiisa ayaa sidoo kale noo sheegtay in Catar uu xanuunsanaa Maalintii uu geeriyoonayay, waxa ayna intaas raacisay in subixii ay ka codsatay in uu shaqada ka joogo inta xaalkiisu uu is badalayo laakiin Catar oo shaqadiisa aad u jeclaa dareemayana mas’uuliyadda saran ayaa diiday in uu seexdo.
Qoyskan oo hadda ku sugan xaalad adag ma jiro gurmad gaaray laakiin wali ma aysan rajo dhigin in ay bulshada Soomaaliyeed iyo cidkasta oo beni’aadanimada tixgelisaba caawimaad u fidiso, qofkii raba in uu caawiyo waxa uu la xiriiri karaa 00252612024287 oo laga helo Qadiiji Aadan oo ah Xaaskii Catar uu ka dhintay.
W/Q: Cabdifataax Arizona
Previous articleMadaxweynaha Jubbaland oo ku baaqay in loo midoobo dagaalka Al-Shabaab “SAWIRRO”